Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Obi nke Mmemme Mmụta America IMEX
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA
Carina Bauer, onye isi otu IMEX kwuru, "Ugbu a bụ oge ịtụgharị uche n'ihe niile." “Anyị na -ekwenyekarị na nhazi ihe omume bụ nka dị mkpa maka ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ anyị. Ugbu a, ọ dịịrị anyị niile iwusi mgbake nke ngalaba anyị ike, na ụwa ka ukwuu n'ụzọ na -emezigharị ma na -adigide mmadụ niile site n'itinye nka ndị a n'ule. Anyị ekepụtala usoro agụmakwụkwọ na -enye echiche ọhụrụ banyere ọdịnihu nzukọ na imebe ihe omume yana nnọkọ raara nye ezi nkwado, iche iche, mmadụ na teknụzụ n'etiti isiokwu ndị ọzọ. ”
Ndị otu IMEX echegharịala ụzọ agụmakwụkwọ ya n'afọ a.
Mmemme agụmakwụkwọ ga -egosipụta ihe ịma aka ụlọ ọrụ ugbu a na ihe ndị kacha mkpa.
N'afọ a, ọ na -ewebata Mmepe Ọkachamara na Upskilling, Mmepụta na Nkwukọrịta, Di iche iche, hara nhatanha, ntinye na nnweta, Innovation na Tech na Mgbake Nzube.
Mmemme mmụta n'efu na IMEX America, na -eme November 9 - 11 na Las Vegas, na -ebido na Smart Mọnde, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8 wee gaa n'ihu na usoro ọmụmụ, tebụl isiokwu dị ọkụ na nzukọ ọmụmụ n'ime ụbọchị atọ nke ngosi ahụ. Dị ka oge niile, ihe nkiri a ga -egosipụtakwa isi okwu MPI kwa ụbọchị, nkọwa zuru oke Ebe a.
Ndị otu IMEX echegharịala ụzọ agụmakwụkwọ ya n'afọ a, na -ewebata Mmepe Ọkachamara na Upskilling, Mmepụta na Nkwukọrịta, Di iche iche, ịha nhatanha, nsonye na nnweta, Innovation na Tech na Iweghachite ebumnobi iji gosipụta ihe ịma aka ụlọ ọrụ ugbu a na ihe kacha mkpa.
Imewe mmemme iji nye ndị mmadụ ike na mbara ala a
In Ebumnuche ebum n'uche maka mgbake nwere nzube, Mariela McIlwraith, osote onye isi nkwado na nkwalite ụlọ ọrụ na EIC, na -akọwa etu Ụkpụrụ nke nzukọ maka mgbake na ihe omume ga -esi nyere aka rụọ ọrụ ike nke ihe omume iji mee ka mgbake dabere na ndị mmadụ, ụwa na ọganihu.
Imekọ ihe ọnụ na -anọdụ n'ihu na etiti #EventCanvas: Maapụ gị maka nzukọ pụrụ iche. Roel Frissen na Ruud Janssen, ndị mepụtara #EventCanvas na ndị rụpụtara mkpokọta Mmepụta Mmemme, chọrọ inyere ndị otu aka ileba anya na 'nnukwu ihe mgbaru ọsọ ha' ma weta ọtụtụ ndị nwere oke n'ime usoro nhazi.
Kedu ka anyị ga -esi mepụta ahụmịhe bara uru nke na -akpali ndị na -ege ntị? Nke a bụ otu nsogbu a na -eme na EventMB Ụlọ nyocha Innovation. Ndị otu a ga-ekerịta ihe atụ dị adị nke imebe ihe omume ejiri wee chụpụ njikọ aka yana omume kacha mma n'ịmefu ego na ịchekwa ego sitere na nkwado.
A ga -etinyerịrị nkwado site na mmalite nke usoro mmemme ọ bụla. Nke ahụ dị ka Courtney Lohmann, onye isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka mmekọrịta mmadụ na PRA. Oge nnọkọ ya Nkwado bụ isi maka imepụta ihe omume gị na -arụ ụka siri ike maka nkwado nkwado mgbe ị na -esetịpụ ebumnuche na ebumnuche.
Iji ihe eji eme ihe iji nyefee 'mgbanwe mgbanwe' na mmụta site na okike iji nyere ndị bịaranụ aka inwe ahụmịhe ihe omume ahụike, nwee obi ụtọ ma nwekwuo nzube. Ọdịnihu anyị chọrọ: Ịmegharị mgbanwe mgbanwe. Ọhụrụ site na ọrụ ha na IMEX's Regenerative Revolution na akụkọ Nature of Space, Guy Bigwood, Onye isi mgbanwe na GDS-Movement, yana Janet Sperstad, onye isi ngalaba na kọleji Madison, ga-ewepụta nyocha ha nke ọma.
Aka Aka Nka na ụzụ
Enwere ike ịkwalite ahụmịhe ihe omume site na teknụzụ ọhụụ na Maritz na-ekerịta mmụta ha na mbụ Ọgba aghara n'oge mgbake: Maritz na -emezigharị ahụmịhe ihe omume site na teknụzụ ọhụrụ. Aaron Dorsey, onye isi njikwa ngwaahịa na Amy Kramer, Onye isi ahịa ahịa na ahịa, na -ekerịta mmụta nke nzukọ ha site na ọrịa na -efe efe, ihe ịma aka ha chere, yana ndị ọgba aghara ọhụrụ ha kpughere na nkata ọkụ a.
AI bụ teknụzụ nwere ike ịkwalite ntinye aka nke ndị na -ege ntị kọwara Michael Campanelli, Onye isi oche Cofounder nke Chillwall AI: “Ma ịchọrọ ịbụ onye na -ere ahịa ka mma, nye ahụmịhe onye ọbịa dị elu, ma ọ bụ bulie ego, ịghọta ihe mmetụta uche dị mkpa. AI nwere ike inye aka…. ” Michael ga -ewepụta nnọkọ ahụ Mkpebi mkpebi na ike nke AI mmadụ na-eme.
Njem azụ na njem ọzara
N'akụkụ agụmakwụkwọ dị na ebe a na -egosi ihe nkiri, ndị bịaranụ nwekwara ike inyocha ebe ọhụrụ IMEX America, Mandalay Bay, na ọtụtụ njegharị. Mgbakọ ntụrụndụ MGM na -ezukọ n'etiti etiti na-enye nlebara anya pụrụ iche na arụ ọrụ ihe nkiri nke ebe ntụrụndụ na ebe mgbakọ. Ndị otu MGM yana MeetGreen, EIC na GES, ga -akpọbata ndị sonyere n'ọzara Nevada ka ha gaa leta MGM Resort's Mega Solar Array dị ka akụkụ nke Ịtụ na ijikwa ihe nrịba ama carbon & njem nlegharị anya anyanwụ.
Lelee IMEX's Knowledge & Events Director, Dale Hudson, na Senior Advocacy & Industry Relations Advisor, Natasha Richards, na -ekwu maka mmemme ihe ngosi sara mbara, egwu ọhụrụ na atụmatụ ngosi ọhụrụ.
Ndị otu IMEX emegharịgharịrị mmemme mmụta n'ịntanetị yana ọrụ ọchụchọ. Ndị ọbịa IMEXAmerica.com nwere ike chọọ ugbu a site na isiokwu, usoro, isiokwu na ụbọchị yana itinye nzacha. Gaa Chọọ Mmemme Mmemme anyị.
IMEX America na -eme Nọvemba 9 - 11 na Mandalay Bay na Las Vegas na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8. Ịdebanye aha - n'efu - pịa Ebe a. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nhọrọ ụlọ na akwụkwọ, pịa Ebe a. Ihe mgbochi ime ụlọ pụrụ iche ka ghe oghe ma dịkwa.